Global Voices teny Malagasy » Korontana Tao Addis : Mitatitra Ireo Blaogera sy Mpanao Gazety Any an-Toerana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Febroary 2019 7:40 GMT 1	 · Mpanoratra Ethan Zuckerman Nandika nirinandrea
Tanatin'ny telo andro izao no niaina tanteraka tanaty herisetra i Addis Abeba, satria namaly ny tora-bato natao taminy tamin'ny alalan'ny fitifirana basy ireo polisy sy ireo tafika mitam-piadiana mahery vaika. Maherin'ny telopolo no voalaza fa namoy ny ainy . Nabaribarin'ireo bilaogera sy mpanao gazety tao an-toerana ho an'izao tontolo izao tamin'ny fampiakarana sary ny zava-nitranga tao Addis sy ny halehiben'izany .
Tohin'ilay fitsapan-kevibahoaka notanterahin'ny parlemantera ny volana May ireo hetsi-panoherana ireo, izay nambaran'ireo mpiandany amin'ny mpanohitra fa nahodinkodin'ny antokon'ny fitondran'i Meles Zenawi. Ny Alatsinainy, mpamily fiarakaretsaka maro no voasambotra ary nesorina tamin'izy ireo ny fahazoandàlana hamily fiara taorian'ny nanoheran'izy ireo ny valin'ilay fifidianana. Izany, narahina fisamborana ireo manampahefana ambony avy amin'ny antoko mpanohitra nampangaina ho namadika, voalaza fa nanentana ny mpanohana ny CUD (ilay antoko mpanohitra sangany) hidina an-dalambe. Haingana sady feno herisetra be ny fihetsiky ny polisy sy ny miaramila nanoloana ireo hetsi-panoherana ireo – nilaza ny dokotera tao amin'ny Hopitaly Black Lion Hospital fa voatifitra teo amin'ny tratrany daholo ny ankamaroan'ireo niharam-boina  ary nampangain'ireo vavolombelona nanatri-maso ho nitifitifi-poana ny polisy sy ny miaramila. Nazret , mpanangona ireo vaovao sy blaogera avy ao Etiopia, no nanokatra sehatra manokana ho an'ny tatitra avy amin'ireo vavolombelona nanatri-maso ny zava-nisy tao Addis  – manara-maso ny adiresy IP izy ireo mba hanamarinana fa tena avy amin'ny solosaina ao Etiopia marina ny fanehoankevitra. Fehinkevitra vitsivitsy avy amin'ireo tatitry ny Nazret :
Raha mbola nitohy ny herisetra, nivadika ho adihevitra teo amin'ireo mpanohana ny CUD sy ny mpanohana ny EPRD (ny antoko eo amin'ny fitondrana) ny adihevitra. Kanefa mbola mitohy androany ireo tatitra alefan'ireo nanatri-maso. Mitatitra ny “Yasteseryal”  :
Sary nalain'i Andrew Heavens avokoa ny ankamaroan'ny sary mampihetsi-po indrindra  avy ao Addis, mpaka sary mahaleotena izy (mpitifitra sary ho an'ny Reuters amin'izao fotoana izao), izay mibilaogy tsy tapaka ao amin'ny Meskel Square . Mazava araka izany fa tsy mbola nanam-potoana hanoratana momba ireo zava-nitranga tao anatin'izay roa andro farany izay izy, ny bilaoginy no tena ho jerena rehefa milamindamina kely eo ny toe-draharaha. Nandefa sary nalain'i Heavens mikasika ilay hetsi-panoherana  sy ireo maro hafa tao Addis i Nazret. Tsy ny rotaka ihany no asehon'ny sarin'i Andrew ao amin'ny Flickr  fa ny fiainana ao Addis amin'ny ankapobeny ihany koa.
Ferengi iray ao Addis , bilaogy iray amin'ny fiteny frantsay mitondra ny anarana hoe “Ny bilaogin'ny vehivavy iray mpila ravinahitra na ny tatitra tsy mahafinaritra mahakasika jadona iray mahazatra ” manolotra karazana resaka manodidina ny herisetra sy mahakasika ny fisamborana ireo mpitarika ny mpanohitra (amin'ny teny frantsay daholo) . Niverina tany Addis izy io maraina io ary nanolotra lahatsoratra nampihetsi-po  iray momba ny takaitra navelan'ilay herisetra :
Niteraka fanehoankevitra maro ny hafatra nalefan'i Sokari momba ilay fifandonana , izay nanakiana be ny governemantan'i Meles sy ny tsy firaharahian'ny vondrona iraisam-pirenena ny hetsika tao Addis. Hoy Selam nanoratra  : “Ahoana no ahafahan'ny tandrefana milaza ho manana ny demokrasia kanefa manameloka ny olona tsy manan-tsiny any Etiopia sy any an-kafa. Ankehitriny, ny tandrefana, i Etazonia sy Angletera no tena mpanohana an'i Meles chenawee ilay mpanao jadona, mpamono olona . Tokony hitovy ny andraikitra raisin'izy ireo noho ireo ràn'ny olona tsy manan-tsiny latsaka, na ao Addis Abeba na any amin'ny toerana hafa ao Etiopia. “
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/27/127209/
 telopolo no voalaza fa namoy ny ainy: https://mg.globalvoices.org/wp-admin/%3Ca%20HREF=
 voatifitra teo amin'ny tratrany daholo ny ankamaroan'ireo niharam-boina: http://www.nazret.com/php/phpBB-5.0.11/phpBB2/viewtopic.php?p=1540#1540
 sehatra manokana ho an'ny tatitra avy amin'ireo vavolombelona nanatri-maso ny zava-nisy tao Addis: http://nazret.com/blogs/blogs/index.php?blog=7&title=live_report_from_addis_ababa_ethiopia&more=1&c=1&tb=1&pb=1
 ny ankamaroan'ny sary mampihetsi-po indrindra: http://www.flickr.com/photos/nazret/58572813/in/photostream/
 Meskel Square: http://meskelsquare.com/
 sary nalain'i Heavens mikasika ilay hetsi-panoherana: http://www.flickr.com/photos/nazret/sets/1269838/
 sarin'i Andrew ao amin'ny Flickr: http://www.flickr.com/photos/andrewheavens/page2/
 Ferengi iray ao Addis: http://www.addisferengi.net/
 lahatsoratra nampihetsi-po: http://www.addisferengi.net/article-1131362.html
 fanehoankevitra maro ny hafatra nalefan'i Sokari momba ilay fifandonana: http://cyber.law.harvard.edu/globalvoices/2005/11/02/ethiopia-riot-police-attack-civilians
 Selam nanoratra: http://cyber.law.harvard.edu/globalvoices/2005/11/02/ethiopia-riot-police-attack-civilians/#comment-14532